Maxkamadaynta profile, ee Khariidadaha Google - Geofumadas
Nofeembar, 2007 Google Earth / Maps, Engineering, topografia
Waa maxay taasi? waa adeeg ku salaysan Googlemaps API, taas oo kuu ogolaaneysa inaad calaamadeeyso khariidada khariidada iyo sawirida muuqaalka wadada. Si aad ah waxtar u leh ujeedooyinka kala duwan ee shaxanka, qaabaynta jidka, goobta antennas iyo ujeedooyin kale.
Interesting, maadaama aad awoodi karto in aad ku darsatid xuduudaha iyo shaqooyinka qunyar-socodka ah, laakiin waa inaad calaamadeeysaa xargaha, ka baxsan khadadka profile
Natiijadu waa qaybaha khariidada oo dusha ka muuqata muuqaalkan aragtida.
Tusaalaha map ayaa calaamadiyay dhibcaha meelaha soo socda:
Nidaamka ayaa soo celin kara masaafooyinka siman, xaglinta xeeladaha ee dhibcooyinka iyo ... indhaha, waddooyinka ayaa lagu kaydiyaa goobta, si ay u awoodaan inay mar dambe u arkaan.
Post Previous«Previous Buug-gacmeedka AutoCAD, oo aad u wanaagsan
Post Next Sidee loo bedelaa unugyada AutoCAD blocksNext »